Rooble oo caawa kulan kula qaatay Hotelka Jaziira, Musharixiinta, Bulshada Rayidka iyo Jeneraal indha cade.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Rooble oo caawa kulan kula qaatay Hotelka Jaziira, Musharixiinta, Bulshada Rayidka iyo...
Waxaa caawa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan aan la shaacin oo ay yeesheem Ra’iisul wasaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Musharixiinta, kulankaas oo caawa ka dhacay Hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho.
Warar hor dhac ah ayaa sheegaya in xubnaha uu kulankaas la leeshay Rooble uu ka mid aha Ra’iisul wasaarihii ka horeeyey Xasan Cali Kheyre iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, kuwaas oo ka maqnaa goobtii xalay lagu kala saxiixday heshiiska.
Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska R/wasaare Rooble ayaa lagu yiri, “Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa Hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho waqti kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay aragtiyo ku aaddan xaaladda dalka.”
Sidoo kale kulanka oo aan horay loo sii shaacin ayaa ku soo aadaya iyadoo xalay ay Hotelka Decale ay heshiis ka kooban lix qodob ku kala saxiixdeen Rooble iyo midowga musharaxiinta.
Wararka ayaa sheegaya in Rooble uu halkaas kula kulmay Bulshada rayidka Qeybaheeda kala duwam.
Sida ku cad heshiiskii xalay raali gelintii Rooble kadib, waxaa ku xusan in xukuumaddu ay mucaaradka kala shaqeyneyso sidii banaanbaxooda ay ugu dhigan lahayeen si nabad ah, iyadoo ammaanka ay sugayaan ciidamada dowladda.
Raisal Wasaare Rooble Xubnaha uu ku arkay Hotelka waxaa ka mid ah Jeneraal indha cade oo maalmo ka hor sheegay in Dalka aysan ka Jirin wax Dowlad ah, balse uu Rooble sheegay in 2021 qof dhahaayo uu arkay meshan ayaan haysanaa oo uu ula jeeday Jeneraal indha cade.
Previous articleFariin ku socoto Isbitaal Martiini oo xaaladiisa Gar gaar laga deyrinayol
Next articleDowladda Eretariya beenisay eedeymo ku saabsan in militarigooda ka dagaallamaya gobolka Tigray ay xasuuqeen shacab
Muqdisho oo saakay caadi ku soo Noqotay kadib Xayiraadii shalay..
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho saakay ayaa sheegaya in markale saakay ay magaalada caadi ku soo laabatay shaqadeeda iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka. 24...
Baarlamaanka Puntland oo sheegay in ay qaadaceen muddo kordhinta golayaasha...
Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta oo Qeylo dhaan ka muujiyay Rabshadihii Muqdisho ka...